सोमबार भीसा दिन अस्वीकार गरेको अमेरिकी दूतावासले एक्कासि यस्तो निर्णय गर्यो हेर्नुहोस् ।
August 13, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on सोमबार भीसा दिन अस्वीकार गरेको अमेरिकी दूतावासले एक्कासि यस्तो निर्णय गर्यो हेर्नुहोस् ।
नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिएको छ । सोमबार भीसा दिन अस्वीकार गरेको अमेरिकी दूतावासले चौतर्फी दबाब पछि मंगलबार नै भीसा दिएको हो । आउँदै गरेको सीपीएल क्रिकेट २०१९ मा भाग लिन अमेरिका जान लागेका सन्दीपलाई सोमबार अमेरिकी दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
आफूलाई अमेरिकाले भीसा दिन अस्वीकार गरेको भनेर उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिएका थिए । त्यो ट्वीट पछि अमेरिका बिरुद्ध नै अनेकानेक धारणाहरु बाहिर आएको र चौतर्फी आलोचना भएपछि अमेरिकाले मंगलबार उनलाई भीसा दिएको हो ।
उनले सन् २०१६ देखि विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्रतियोगिताको लागि गइरहेको अवस्थामा सीपीएल खेल्न अमेरिका जाने अनुरोध अस्वीकृत भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
तर, मंगलबार नै उनले आफूलाई फेरि दूताबासले भीजा दिएको बताएका छन् । उनले गरेको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री,परराष्ट्रमन्त्री, अमेरिकी दूतावासलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई मेन्सन गरेर ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
श्रीमतीलाई नर्सिङ पढाउन ११ वर्ष मलेसियामा घोटिए, नर्स बनेपछि पोइल गइन्..😥😭..हेर्नुहोस् ।
‘नेपाल प्रहरीको नाम फेरेर ‘नेकपा प्रहरी’ राखौँ’-सांसद डा. अमरेश सिंह
September 16, 2019 Daily News Nepal
विद्यालय भित्रै बियर सहितको पार्टी: प्रधानाध्यापकद्वारा गल्ति गरेको स्वीकार ! खास भएको के हो ? हेर्नुहोस्
June 17, 2019 Daily News Nepal
June 27, 2019 Daily News Nepal